iOS 12 ကို support ပေးတဲ့ iPhone မော်ဒယ်တွေနဲ့ Key feature များ – AsiaApps
iOS 12 ကို support ပေးတဲ့ iPhone မော်ဒယ်တွေနဲ့ Key feature များ
September 18, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on iOS 12 ကို support ပေးတဲ့ iPhone မော်ဒယ်တွေနဲ့ Key feature များ
Apple ရဲ့ နောက်ဆုံး iOS operating system ဖြစ်တဲ့ iOS 12 ဟာတော့ လပေါင်းများစွာ Beta version ၁၂ ခုထွက်ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့မှာတော့ Official version အနေနဲ့ထွက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်ရှိတာမကြာသေးတဲ့ IOS 12 ကိုအသုံးပြုနိုင်မယ့် iPhone မော်ဒယ်တွေကတော့ ၂၀၁၃ ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone7Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xr, iPhone Xs, iPhone Xs Max တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ iPhone အပါအဝင် iOS 12 ကို support လုပ်တဲ့ device list အပြည့်အစုံကတော့ ?
iOS 12 မှာပါဝင်လာတဲ့ Feature တွေကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတုန်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ WWDC 2018 မှာကြေညာခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ အဲ့လို iOS 12 မှာပါဝင်တဲ့ feature တွေထဲက အချို့ကို ကျွန်တော်တို့ asiaapps အနေနဲ့ Key Feature တွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
IOS 12 မှာဆိုရင် Keyboard ကိုအသုံးပြုရတာပိုပြီးမြန်ဆန်လာမှု၊ ကင်မရာဖွင့်လိုက်တဲ့အခါရော အသုံးပြုတဲ့အခါမျိုးမှာပါ ပိုမိုမြန်ဆန်လာမှု အစရှိတဲ့ ခံစားမှုတွေကိုရရှိအောင် Performance ပိုင်းကို ကင်မရာပိုင်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ Keyboard display ပိုင်း ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း အထိမြှင့်တင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် App Launching အပိုင်းမှာလည်း 2x နှုန်းအထိမြှင့်တင်ထားတာကြောင့် App တွေ lauch လုပ်တဲ့အခါပိုပြီးမြန်ဆန်လာမှာဖြစ်သလို အသုံးပြုရတာပိုပြီး Smooth ဖြစ်လာပြီး Multi-tasking လုပ်တဲ့အချိန်တွေမှာပါ ပိုပြီးအဆင်ပြေသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Screen Time ကတော့ အသုံးပြုသူအနေနဲ့ ဘယ် app ကိုအသုံးပြုပြီးဘယ်လောက်အထိ အချိန်တွေကုန်နေပြီလဲဆိုတာကို Track လုပ်ပြီးမှတ်သားပေးသွားမယ့် Feature ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ် app တွေက Notification အများဆုံးပို့လဲ၊ ဘယ်လောက်အထိ ios device မှာအချိန်ကုန်နေလဲဆိုတဲ့ အထိတိတိကျကျဖော်ပြပေးသွားမှာမလို့ တကယ်ကို အသုံးဝင်မယ့် Feature တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Group Notification ကတော့ မိတ်ဆွေဖုန်းထဲကိုဝင်လာတဲ့ Notification တွေအားလုံးကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းဖော်ပြပေးတဲ့ feature ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Message ကဝင်လာတဲ့ Noti ဆို တစ်စု၊ Messenger ကဝင်လာတဲ့ Noti ဆိုတစ်စု ပုံစံမျိုးနဲ့ Notification ကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် အရင်တုန်းက Noti တွေပြန့်ကျဲနေမှာတော့ စိတ်ရှုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။
Siri Shortcut app
ဒါကတော့ Siri ကို Apple ကထုတ်တဲ့ Third party app တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Shortcut app နဲ့ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်မယ့် Feature ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Siri ကိုခိုင်းမယ့် Voice command ကို Shortcut app အသုံးပြုပြီး ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက် Shortcut ပေးပြီး ခိုင်းနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ တစ်ခုရှိတာက Siri Shortcut အသုံးပြုမှုဟာ old model iPhone တွေဖြစ်တဲ့ iPhone 5s, iPhone6နဲ့ iPhone6Plus တွေမှာအလုပ်မလုပ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။
Download link (Shortcut app) – https://itunes.apple.com/us/app/workflow/id915249334?mt=8&pt=11l8808&ign-mpt=uo%3D4
Animoji, Memoji and Camera effects
iOS 12 မှာဆိုရင်တော့ Animoji အသစ် ၄ ခုပါဝင်လာမှာဖြစ်သလို Customize လုပ်နိုင်တဲ့ လူရုပ်လေးတွေ (Samsung S9 ရဲ့ AR emoji ပုံစံ) လည်းပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Messages နဲ့ FaceTime ကင်မရာတွေမှာ Filters, Stickers & Text Effects အစရှိတာတွေက Camera effects အနေနဲ့ ပါဝင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Note: Animoji နဲ့ Memoji ဟာ True Depth ကင်မရာကိုအသုံးပြုရတာဖြစ်တဲ့အတွက် iPhone X, Xs, Xr တို့မှာပဲအသုံးပြုနိုင်ဉီးမှာပါ။ နောက်ပြီး အသစ်ပါဝင်လာတဲ့ Camera effects ဟာလည်း iPhone 6s နဲ့နောက်ပိုင်းမော်ဒယ်တွေမှာမှ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ :’)
ဒါတွေကတော့ iOS 12 မှာပါဝင်လာတဲ့ Feature တွေထဲကမှ Key အနေနဲ့ သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ Feature တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Performance ပိုင်းတွေ၊ Group Notification တွေ၊ Screen Time တွေက အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ iOS 11 နဲ့ယှဉ်ရင်တော်တော်လေးစကားပြောတဲ့အချက်တွေဖြစ်တာမို့ iOS 12 ကိုအမြန်ဆုံး update လုပ်သင့်ပါပြီနော် iPhone user မှန်ရင်ပေါ့ ?)
Apple, Firmware Updates, iOS
iPhone Xs/ Xs Max ကိုမဝယ်ယူသင့်သေးတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းများ
Gaming စမတ်ဖုန်းအတွက်ကြိုးစားနေပြီဖြစ်တဲ့ Nokia